एकाएक बढ्याे प्रचण्ड र बाबुरामकाे सक्रियता – Paluwa Khabar
कार्तिक २२, २०७७ शनिबार 56
काठमाडौं । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज बिहानैबाट राजनीतिक भेटघाट तिब्र बनाउनुभएको छ । जनता समाजवादी पार्टीको डा. बाबुराम भट्टराई खेमासँग सहकार्य थालेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले भेटघाटलाई तिब्रता दिन थालिरहनुभएको छ ।
आज बिहानै प्रचण्डले आफ्नो निवासमा नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई बोलाउनुभएको थियो । प्रचण्ड निकट स्रोतका अनुसार आज बिहानै झलनाथ खनाल पनि प्रचण्ड निवास पुग्नुभएको थियो ।
आज बिहानको छलफलमा माधवकुमार नेपाल भने नपुग्नुभएको बताइएको छ । नत्र उहाँ हरेक बिहान प्रचण्ड निवासमा पुग्ने गर्नुहुन्छ । आजको छलफलमा पम्फा भुषाल र वर्षमान पुन पनि उपस्थित हुनुभएको बुझिएको छ ।
उहाँहरुको छलफल चलिरहेको बेला स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल प्रचण्ड निवास पुग्नुभएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बन्धी केही सल्लाह गर्न पुग्नुभएका भानुभक्त पुग्नासाथ उहाँहरुको विशेष छलफल रोकिएको थियो । त्यस लगत्तै बामदेव र झलनाथ बाहिरिनुभएको थियो ।
यसै बीच प्राप्त अर्काे जानकारी अनुसार जनता समाजवादी पार्टीको डा. बाबुराम खेमासँग प्रचण्डले वार्तालाई निरन्तरता दिनुभएको छ । यस क्रममा बिहीबार राति बाबुरामको खेमासँग प्रचण्डको वार्ता भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन नेपाली कांग्रेसको साथमा मिल्न प्रचण्डले जनता समाजवादी पार्टीलाई मनाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ । कांग्रेससँग मिलेर विशेष अधिवेशन बोलाउन डा. भट्टराई तयार भए पनि जनता समाजवादीका अन्य नेताहरु आनाकानी गरिरहेका छन् । यही कारण प्रचण्ड र बाबुराम मिलेर जनता समाजवादीका नेताहरुलाई मनाउन भेटघाट बाक्लो बनाइएको बुझिन्छ ।
Prevप्रधान मन्त्रि ओेलिकाे जवाफ – म बैठक बाेलाउंदिन
Nextसल्यानमा जिप दुर्घटना हुंदा तीन जनाकाे ज्यान गयाे